Alaknanda @ Aashraya: I-Himalayan Farmstay Cottage
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguIshank
I-Aashraya yindawo ekhethekileyo yokubuyela e-Himalayan ebekwe elunxwemeni lomlambo iGanga, kwilali encinci emalunga neekhilomitha ezingama-45 ngaphambi kweRishikesh. Ijikelezwe buhlaza obuluhlaza, isandi esiphuphumayo somlambo, kunye neengoma ezimnandi zeentlobo ngeentlobo zeentaka, le ndawo ifanelekile kumthandi wendalo kuwe.
I-Alaknanda yenye yee-03 ezigqwesileyo zomoya / iindlwana ezifudunyeziweyo ezinendawo yangaphakathi ehonjisiweyo kunye neefestile ezinkulu zeglasi ezikuvumela ukuba ungene kwindawo eyoyikisayo yendawo engqongileyo.
cottage nganye imalunga 1000 square iinyawo ubukhulu kwaye ibhedi kabini kunye nendawo eyaneleyo 02 iibhedi ezongezelelweyo ukuba indlu ubungakanani beqela lilonke 04 pax kwi cottage nganye. Sizibekele imigangatho ephezulu kakhulu ngokwethu. Umbono yayikukusebenzisa isamente encinci kangangoko kwaye akukho RCC. Sasifuna ukusebenzisa umbandela wasekuhlaleni omninzi kangangoko kunokwenzeka. Onke amagumbi ethu ane-air-conditioner yokupholisa kunye neyokutshisa iinkuni zokufudumeza kwaye siqokelela iinkuni ezifileyo ukuze sizitshise kwizifudumezi zamagumbi ethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Ishank
I-Depi ihamba kakhulu ukuze ingabikho ngalo lonke ixesha. Nangona kunjalo, xa ekhona, uyathanda ukunxibelelana neendwendwe kunye nokwabelana ngamabali.
Siqeshe abasebenzi base…
Iilwimi: English, Deutsch, हिन्दी